Pôrtô Rikô : Asa Loha Momba Soso-kevitra Angovo Azo Amin’ny Rivotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2012 13:29 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
“Tsapan'i Don Quijote fa nilainy ny niaro ny tenany nanoloana ireo goavana. Ilaiko ny miaro ny fianakaviako manoloana ireny goavana ireny izay naka toerana eny anivon'ny faritra be mponina. Tsy vitan'ny hoe indray mandingana miala ny trano[nay] ry zareo fa mbola eny amin'ny tany fambolena tena mahavokatra koa,” hoy ny nosoratan'i Raúl Colón, Portorikana mpitoraka bilaogy, tao anatin'ny lahatsoratra iray nitondra ny lohateny hoe “Don Quijote, “Molinos”, Loza Mitatao Amin'ny Fahasalamana, & Santa Isabel” [es] tamin'iny volana May lasa iny. Mponina iray ao Santa Isabel, kaominina iray amorontsiraka atsimon'i Puerto Rico, sahiran-tsaina amin'ny loza mitatao amin'ny fahasalamana mifandray amin'ny fisian'ireo tiorbina 44 ahodin-drivotra eo akaikin'ny tranony i Raúl.
Ny tetikasa “Finca de Viento Santa Isabel” (Sahan-dRivotra ao Santa Isabel), an'ny orinasa iray avy any San Francisco, California, Pattern Energy, dia iray amin'ireo tetikasa marobe [es] amin'ny angovo azo havaozina misanda an-davitrisan-dolara nikasa ny hanomboka ny famokarany amin'ity taona ity ao amin'ilay nosy – ary raha vantany vao vita dia io no ho iray goavana indrindra amin'ny karazany any Karaiba. Milaza ilay orinasa ao amin'ny tranonkalany fa miandrandra “ny hanolotra angovo madio, azo antoka sy azo havaozina mitovy amin'ny vokatra herinaratra isan-taona ilain'ny tokantrano miisa 25,000 eo ho eo.” Kanefa, vao ny voalohany tamin'ireo tiorbina no voatsangana tamin'ny herinandro faramparan'ny volana May, nanomboka nanana fisalasalàna ny sasany tamin'ireo mponina maherin'ny 21.000 ao Santa Isabel tahaka an'i Raúl, mikasika ilay tetikasa sy ny maha-akaiky loatra azy ireny amin'ny tranony.
Ireo vondrona mafàna fo feno ahiahy, tahaka ny Frente de Rescate Agrícola (FRA) [es] (Mandatehezana Miaro ny Fambolena) dia nanaitra ny fahatsiarovantena mikasika ny sahan-drivotra Pattern Energy ao Santa Isabel amin'ny filazana [es] fa hoe ilay tetikasa dia hitondra voka-dratsy eo amin'ny indostrian'ny fambolen'ilay kaominina sy ny fahasalaman'ny mponina ao aminy – tsy misy an'izany tombontsoa ho fampidinana ny sandan'ny angovo izany. Ny Filohan'ny Fikambanan'ny Tantsaha ao Puerto Rico, Ramón González, dia nikaikitra mafy an'ilay tetikasa, nanambara tamin'ny mpampahalala vaovao hoe : “Inona no hitranga raha toa ka manelingelina sy mampiasa loha ity tranga ity. Efa nataon-dry zareo ho sorona ny tany mirefy 3.000 acres (eo amin'ny 1215 hektara) tamin'ireo tany faran'izay namokatra indrindra teto amin'ny nosy.” Mpikambana maro avy amin'ny FRA no nosamborina tamin'ny faran'ny taona lasa rehefa nanao hetsi-panoherana teo amin'ilay toerana.
Tsy vao izao no voalohany niatrehan'ny Pattern Energy fanoherana avy amin'ireo mponina tsy mandry saina ; tetikasa iray mitovitovy amin'izao tao Ocotillo Wells any San Diego County, California no efa nisedra fanoherana ihany koa. Mandritra izany, ireo mponina avy ao Falmouth, Massachusetts dia efa nanomboka sahady niresaka momba ny fiantraikan'ny tabataba aterak'ireo tiorbina amin'ny fahasalamany, nitondra tamin'ny fampiatoana vonjimaika an'ilay tetikasa.
Hiverenantsika i Puerto Rico, ireo mponina ao amin'ny kaominin'i Guayanilla dia nitatitra ny fisian'ny setroka mampiahiahy nivoaka vao haingana [es] avy amin'ireo tany triatra any amin'ny tetikasanà sahan-drivotra iray an-dalam-panamboarana. Ilay tetikasa misedra olana [es], an'ny Windmar Renewal Energy, dia niafara tamin'izay faritan'ny maro amin'ny hoe loza mahatsiravina ara-tontolo iainana [es].
Ity ambany ity, fitsidihana amin'ny fomba mahatsikaiky ny fotodrafitrasan'ny Pattern Energy ao Santa Isabel ataon'ilay artista sady mpiangaly mozika Portorikana tsy miankina, Fernando Castro Álvarez. Ilay lahatsary dia manasongadina an'ilay mpilalao “El obrero Curet”, mpiasa iray faly tokoa tsy mitsitsy aina sy fananana amin'ny anaran'ny “fandrosoana,” ary novokarina ho isan'ny tetikasa ara-haino aman-jery sahanin'i Fernando, La Avanzada Y.